Started by Abdullahi hassan mohamed, 27 Feb 2016
Abdullahi hassan mohamed 4
Waa maxay Saxaafada ?
Mandeeq Mohamed Aflixi Bar ama Baro ismaciil ibrahim maxamud 1 other like this
Posted 18 Apr 2016 (edited) · Report post
Sidee ayaad ku noqon kartaa wariye magac ku leh dunida?
Warbaahintu waa war isgaarsiin, ayadoo la marinaayo warkaas TV (Muuqaal baahiye) Radio, website, wargeys iyo majalad, ayadoo maalmahan dambe ay soo korortay waxa loo yaqaao warbaahinta baraha bulshada (social media) eray ahaan waxaa wanaagsan warbaahinta halka dadka qaar ay dhahan saxaafad oo eray ahaan kasoo jeedo afka carabiga.
Wadama soo korayo oo uu wadankeena kamid yahay ayaa lagu tiriyaa wadama cabuirya saxaafada ayagoo wariyeyaasha caqabado badan ka soo waajahaan dhan walbo oo nolosha khuseysa, blasé ayadoo saas ay tahay ayaa waxaa la heli karaa wariyeyaa meel sare dunida ka gaaray magac weyna ku leh dunida oo dhan.
Sifooyinka wariyaha guuleystaha ah
Wariyaha waa inuu noqdaa midka tarjumaya waxa wanaagsan, soo bandhigo xaqiiqda, gaarsiiyo bulsho weynta baahiyaha iyo caqabadah jiro, asiga oo aan cid ku xadgudbeynin.
Sifooyinka wanaagsan oo looga baahanyahay wariyha si uu noqdo mid ka dhax muuqdo dhigiisa, magacna ku yeesho dunida oo idil waa sida tan:
§ Waa inuu noqdaa ama noqotaa qof u diyaarsan gudashada shaqada wariynimo si hufnaan ay ku dheehantahay.
§ Waa inuu yahay qof diyaar u ah inuu barto afaf kale, hadii luqadaha uu ku hadli karo bataan ay badanaayaan fursadiisa inuu magac yeesho.
§ Waa in uu aqoon gaar ah u leeyahay warbaahinta, waxna ka soo warbaahinta.
§ Waa in uu wax ka yaqaanaa shuruucda caalamiga ah ee ku aadan shaqadiisa.
§ Waxaa looga baahnyahay inuu aqoon gooni ah u yeesho dhaqanka bulshada uu ka dhax shaqeynayo.
§ In uu diyaar u yahay inuu ka faiideysto khaladka yare ee ka dhacaya, una noqoto khibradiisa berito.
§ Waa in uu aqoon u leeyahay taariikhda dunida, sidoo kale bulshada uu ka dhax shaqeynayo.
§ Waa inoo ahaadaa mar walbo qof xiiso u qabo shaqadiisa.
§ Waa inuu noqdaa qof hal abuur leh, dad badan oo kala duwan wax ka dhaadhicin karo.
§ Wariyaha waa inuu u shaqeeyaa qaab ay ku dhisantahay xirfadnimo iyo hufnaan shaqo.
§ Waa inuu ahaadaa qof aan u eexaneyn cid gooni ah, sheegayana waxa dhabta ah.
§ Waa inuu ahaadaa qof heegan ku jiro, diyaarna ah waqti walbi hadii loo baahdo.
§ Waa inuu ahaadaa wariyaha qof aqoontiisa kordhista mudo yar kadib, si uu uhaado qof la jaanqaadi karo dhigiisa ee horumaraya.
§ Waa inuu ahaa wariyaha mid ka shaqeeynaya danta guud, si dadka u ahaan kuwa wada jira.
§ Waa inuu mar walbo ku dadaalaa sidii uu magac ku yeelan lahaa, kagana dhax muuqan lahaa dadka ay wada shaqeeyaan, asigoo kordhinaya xirafdiisa waqti walba.
§ Waa inuu ka fogaadaa waxa saameyn gaar ah ku yeelan kara, magaciisana hoos u dhigi karo.
§ Waa inuu lahaadaa xirfada warbixin qoraalka, iskuna dayaa inuu sare u qaado waqti walba.
§ Waa inuu lahaadaa xirfada cilmi barista iyo xog aruurin sidoo kalena falanqeynta xogtaas.
§ Waa inuu ahaadaa qof jecel inuu wax aqristo, daawado barnaamijayada la xiriio shaqadiisa, sare u qaadi karto xirafdiisa.
§ Waa inuu lahaadaa xirafada wareysiga qaabaheeda kala duwan.
§ Waa inuu ahaadaa qof dagan hadii xaalado cadaadis ah uu la kulmo.
§ Waa inuu ahaadaa qof ka fog xog ama war dad kale in uu ka soo guuriyo ayagoon idin u siinin.
§ Waa inuu ahaadaa wariyaha qof anshax ahaan wanaagsan, ilaaliya xuquuqda dadka kale iyo fikirkooda.
Edited 19 Apr 2016 by Aflixi Bar ama Baro
cabdi Mandeeq Mohamed deka ahmed like this
Mohamed Saed Hussein 2
waxaan u ahay diyaar wax walba oo waajib ahna waa diyaar waayo umadadyda ayaan rabaa in aan wax uqabto xaga saxaafada somlida
Aflixi Bar ama Baro Mandeeq Mohamed like this
jawaabta waa maxay suxufnimadu
sidaanu ka wada dharagsan nahay dhibka iyo waliba tacadiyada heerka aqoo la a'aaneed iyo baahiyaha aas'aasiga ah ee ku xayn daaban saxaafada . soomaalida ,haddana saxaafadu waa hubka lagu dagaalamo dunida maanta marka laga yimaado dhaqaalaha iyo tiknoolajiyada casriga ah .
Mandeeq Mohamed Aflixi Bar ama Baro like this
asc dhamaan asxaabta kamida aflixi waxa aan idin waydiinlahaa sida aynu ogsoonahay numa lihin goobo lagu barto saxaafada si wanaagsan hadaba sideee baan ku baran karaa? meelaheese aanka heli ka baraha bulshada hadii aan doono inaan barto?mase la heli karaa policy words baro badan oo luqada soomaaliga iyo ingriish is ku turjuman thanks wllo jawaab wacan
Mandeeq Mohamed ismaciil ibrahim maxamud Aflixi Bar ama Baro like this
ismaciil ibrahim maxamud 1
​Tankaga bahda isticmaasho aflix waaxan rabaan idin an wada socono oo an xiirno balse see baan ku xiiri karna waaye suuasha JAWAABTUNA WAAA XIIGANA..by ismaciil
Mandeeq Mohamed likes this
Mandeeq Mohamed 2
Saxaafaddu waa Cilmi la barto waxaana loo bartaa Sidii Bulsho meel ku nool loogu soo gudbilahaa macluumaad ay u baahan yihiin sida wacyi galinta caafimaadka , horumarinta Deegaan, ka hortaga tariibka iyo wixii lamid ah intaas ayaan ku soo koobi lahaa thanks.
khadaraxn dahir duco like this
Mshllh guulesta wlalayal